तीनदिनसम्म लगातार करिब १२० किलोमिटरको दूरी पैदलै हिँडेर, अनिताले क्वारेन्टाइनमै जन्माइन जुम्ल्याहा शिशु ! – Online Nepal
दाङ : दाङको तुलसीपुरस्थित रक्षाचौरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेकी अनिता यादवलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि गत शुक्रबार राति राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुरमा लगियो । अस्पताल पु¥याएलगत्तै जुम्ल्याहा शिशु जन्मिए । जुम्ल्याहा दिदीबहिनी अनिताका पाचौँ र छैटाँै सन्तान हुन् । कम तौलमै जन्मिएकाले शिशुलाई सोही दिन तुलसीपुरको तुलसीबाल अस्पताल पठाइयो र हाल अतिसघन कक्ष (एनआइसियु) मा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
अनिताका ४५ वर्षीय श्रीमान् तिलकराम यादवले अब जुम्ल्याहा छोरीलाई कसरी पालन पोषण गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रीमती र छोरीहरुको राम्रो स्याहार गर्ने बताउनुभयो । अनिता मुस्लिम समुदायकी छोरी हुन् । उनका श्रीमान् तिलकराम पनि भारतको बलरामपुरका स्थायी बासिन्दा हुन् । उहाँहरुको विसं २०५८ मा बिहे भएको थियो । हाल उहाँहरुले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको–१३ स्थित सास्स खुट्टीको ऐलानी जग्गामा सानो कच्ची घर बनाएर बस्दै आउनुभएको छ ।
Prevअमेरिका, युरोप, कोरिया लगाएत अन्य बिकसित देशमा रहेका नेपालीले भने, ‘बिन्ती छ सरकार, हामीलाई स्वदेश फर्काइदेऊ’
नारायणगढ–मुग्लिन–नौबिसे सडकबाट फेरी आयो यस्त्गो खबर
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45344)